Radio Don Bosco - Masindahy Arsène de Scété
Masindahy Arsène de Scété
19 jolay — Voalaza fa tao Roma no teraka i Arsène. Lasa diakra izy ary avy eo voatendry ho précepteur ny zanaky ny amperora Théodose I, tao amin’ny lapa tao Constantinople araka ny fangatahan’ny papa Damase I, izay nahalala ny fahamasinany.
Nandritra ny 10 taona no nanaovan’i Arsène izany adidy goavana izany, na dia teo aza ny tsy fanajana azy nasehon’i Arcadius sy i Honorius zanak’i Théodose. Nametra-pialana izy ary avy eo lasa nitoka-monina tany an’efitra tany Alexandrie. Rehefa maty Theodose dia nisintaka tany Scété izy, ary tao no nahafantarany ny fiainan’ny mpanirery niaraka tamin’i Masindahy Jean le Nain.
Naniry te ho olomasina tokoa i Arsène ka niezaka nanao ny fiainan’ireo mpanirery tany amin’ny tany efitra. Nifehy tena mafy izy ary nohalaviriny ny teny tsy voahevitra, notandrovany ny fanginana, nasehony ny maha sarobidy ny fanabeazana. Nanokan-tena hanirery sy hamola-tena mafimafy kokoa noho ny hafa izy. Voalaza fa nahavita nivavaka izy, eo am-panandratana ny tanany miakatra any an-danitra, manomboka amin’ny fiposahana ka mandram-pilentiky ny masoandro. Ny tena nampiavaka azy dia ny tomaniny isaky ny misy zava-mitranga. Hitomaniany avokoa, eny fa na dia ny tsy fahalavorariany sy ny an’ireo mpianany aza. Toa hoe niendaka avokoa ny volomasony noho izany tomaniny izany.
Tamin’ny taona 434 rehefa nananika tao Scété ireo baribary dia voatery nandao ny toerana nitokanany monina i Arsène. Voatery nipetraka tao amin’ny lava-bato tao Tourah akaik’i Memphis izy, avy eo tany Canope ary farany niverina tany Tourah indray, ary tao izy no nodimandry ny taona 450. Nambarany ny fahatahorany ho faty talohan’ny nialany aina am-piadanana. Taty aoriana kely dia nisy tantaram-piainany nosoratan’i Masindahy Théodore.